Izibonelelo eziphezulu eziphezulu zokusebenzisa i-GitHub - Semalt Expert
Ukuba ungumqhubi wesofthiwe okanye umprogram, kufuneka ukuba uvile ngeGitHub. Le nkonzo yokusingatha ineempawu ezingavamile ezifana nezixhobo zolawulo lomsebenzi kunye nesikhombisi-sikhombisi esisekelwe kwiwebhu.
Ikhupha iiprojekti zekhowudi yomthombo kwiilwimi ezininzi zeprogram kwaye igcina inguqu yeenguqu ezenziwe ukulungiswa. Kananjalo inezinto ezinxulumene nazo ezifana ne-wikis kunye nokulandelwa kwegciwane. Inzuzo enkulu yokusebenzisa i-GitHub ixoxwa ngezantsi.
1. Izicwangciso ezahlukeneyo ziyafumaneka:
I-GitHub inikeza izicwangciso eziphambili neziphambili kwaye zifanelekile ukusetyenziswa ngabaqeqeshi nabangasebenzi. Unokukhetha isicwangciso esekelwe kwiimfuno zakho kwaye uhambelane neeprogram zeprojekthi ze-software ezivulekileyo ngokufanelekileyo. I-GitHub ithi inabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezili-15 emhlabeni jikelele kunye nama-repositories angaphezu kwezigidi ezingama-55, okwenza ibe yinye yeeplani ezinkulu.
NgeGitHub, unokwenza iiprojekthi ezivulelekileyo zeprojekti ezinje njengamaxwebhu anzulu kwaye ufumane ingxelo evela kwiingcali. Le nkqubo yenza kube lula kuwe ukuba uhlalutye umgangatho wekhontenti yakho.
3. Bonisa umsebenzi wakho:
Ngaba ufuna ukubonisa umsebenzi wakho nokutsala abathengi abaninzi? I-GitHub iyona nto inokuthenjwa kunye neyona nto ibaluleke kakhulu kulo mbandela; kunye nabo, abavelisi bangabonakalisa umsebenzi wabo kwaye babandakanye abaqashi nabaninzi abavela kuzo zonke iindawo zehlabathi.
4. Yakha i-akhawunti yakho ngokulula:
Ukuba ufuna ukufumana inzuzo kwiGitHub, kufuneka wenze i-akhawunti. Nangona kunjalo, iifowuni zoluntu zinokukhutshwa kwaye zipheqululwe ngaphandle kwe-akhawunti. Njengomsebenzisi obhalisiweyo, uya kukwazi ukulawula, ukuxoxa nokudala iifasta ezahlukeneyo, ngenise iminikelo yakho kwaye uhlaziye iinguqu zokutshintsha.
5. Imisebenzi yokunxibelelana ngeeNtlalo:
IGitHub inikeza imisebenzi enxibelelwano enxulumene nentlalo enjenge-wikis, abalandeli, ukuthandwa, izabelo, izimvo kunye nokutya. I-graph ye-social network graph ikunceda ukuba ubonise umsebenzi wakho kwaye ugcine uhlaziywa ngezihloko ezihamba phambili.
Ukumaketha kusivumela ukuba sisebenzise umhleli wombhalo olula ukuhlela okanye ukubhala amaxwebhu ahlukeneyo. Ngokungafani nezinye izixhobo eziqhelekileyo, akukona nje kuphela ukufometha umxholo wakho kwifom ehleliweyo kodwa uyayisindisa kwisiseko sayo sokusebenzisa ngaphandle.
7. Ukulandelela utshintsho kwiinguqu ezahlukeneyo:
Xa abantu abahlukeneyo bebambisana kule projekthi, kungenakulula ukugcina umkhondo wezinto zonke. Kodwa ngeGitHub, unako ukulandelela utshintsho kwaye ugcine irekhodi lokuhlaziywa. Le software isebenza ngokufana neGoogle Drive kunye ne-Microsoft Word; kunye neGitHub, unokufikelela kwiinguqu ezahlukeneyo zefayili kwaye akudingeki ukuba ufunde iilwimi zeprogram eziphambili.
8. Iyahambelana namaqonga ahlukeneyo:
Enye yezinto ezibalaseleyo zeGitHub kukuba iyahambelana neGoogle Cloud kunye ne-Amazon. Kwakhona, le projekthi ibonisa i-syntax kwiilwimi ezili-150 zeenkqubo kwaye yenza lula umsebenzi wakho Source .